Osimiri Mississippi: njirimara, mbido, flora, anụmanụ na mkpa akụ na ụba | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime osimiri ndị kasị mkpa na United States dum bụ Osimiri Mississippi. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ otu n'ime osimiri ndị kachasị ogologo na North America niile, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara mba ahụ. Osimiri a enyela aka nke ukwuu na mmepe nke ọdịbendị na ọha mmadụ na ebe ndị a. Ha na Osimiri Missouri, ha bụ otu n'ime usoro mmiri kachasị mkpa na ụwa.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara niile, geology, usoro, flora na fauna nke Osimiri Mississippi.
2 Zọ na-asọ
3 Ntughari Osimiri Mississippi
4 Flora na anụmanụ nke Osimiri Mississippi
5 Mkpa akụ na ụba na egwu
Osimiri a dị n’ebe ọwụwa anyanwụ nke kọntinent America. Isi iyi ya bụ Lake Itasca, nke dị na Minnesota. N'oge dum njem ya, ọ gafere ugwu a ma ama dịka Ugwu Rocky na Ugwu Appalachian. N'ime oge njegharị ahụ dum, ọ gafere ụdị ihe okike na obodo mepere emepe ruo mgbe ọ kwụsịrị na Ọwara Oké Osimiri Mexico. Ọnụ nke osimiri a bụ obosara sara mbara.
Mkpokọta ogologo nke Osimiri Mississippi bụ ihe dị ka kilomita 3734. Ntuziaka a ezughi oke ebe ọ bụ na agbanwere ọwa na ọnụ nke mmiri ahụ ọtụtụ oge. Isi ihe kpatara mgbanwe ndị a na ọwa ahụ bụ na sedimenti na obere nsị na-aba ụba, na-eme ka mmiri na-asọ mgbe niile. Ọ bụkwa na sedimenti bụ akụkụ nke usoro isi ebufe ihe site na mmiri. Ọ bụrụ na akụrụngwa nke ókèala ya nwere nwere ọtụtụ ụrọ na ụrọ, ọ ga-yikarịrị ka mmiri na-asọba na mmiri ahụ ga-adalata n'ọtụtụ oge.
E kewara Osimiri Mississippi ụzọ abụọ dị mkpa: n'otu aka, anyị nwere Mississippi nke elu ma, n’aka nke ọzọ, anyị nwere Mississippi dị ala. Akụkụ mbụ nke osimiri a na-amalite site na isi iyi ya na Lake Itasca ruo na ịgafe ozu mmiri na Osimiri Missouri. Osimiri a bụ isi iyi dị ukwuu nke na-eme ka mmiri mmiri a na-asọba. Akụkụ nke abụọ nke Osimiri Mississippi amaliteworị ozugbo ọ ga-ejikọta Osimiri Ohio ruo n'ọnụ ikpeazụ ya.
N’akụkụ ụzọ ya, o nwere obosara na-agbanwe. Na akụkụ mbụ nke ngalaba dị nso na mmalite, yana Lake Itasca, a na-edekarị obosara n'etiti 6 na 9.1 kilomita. Mgbe ọ gafere Ọdọ Mmiri Winnibigoshish anyị nwere ike ịhụ na ọ nwere elu ruru kilomita 11. O nwekwara ngalaba ebe ọ nwere nnukwu omimi ebe ọ na-eburu nnukwu iyi. N'ebe dị nso na New Orleans ọ ruru omimi nke ihe ruru 61 mita.
All a nnukwu eruba pụtara na ha bi na akaụntụ nke ihe 3 nde square kilomita. Nke a na - anọchite anya 40 na 41% nke mpaghara ụwa dum United States. Thezọ abụọ ahụ na ogologo ya mere ka osimiri ahụ gafere steeti 31 na mpaghara 2 nke Canada. Ọsọ a mmiri na-asọ na isi karịrị 2 km / h. Akụkụ ụfọdụ nwere ha nwere oke ọsọ nke na-agba ọsọ ọsọ ruo kilomita 5 kwa elekere. Ma nha ma nrugharị, a na-ahụta Osimiri Mississippi dị ka bezin nwere nnukwu ogo nke anọ nọ n'ụwa.
Ntughari Osimiri Mississippi
A na-eche na mmalite nke osimiri a bụ obere ekele maka akpụrụ mmiri kpụrụ mgbe nnukwu kọntinent a na-akpọ Laurentia dị. Ọzụzụ ya laghachiri nso Ice afọ. Ka ice gbazere, a na-agbanye nnukwu mmiri niile na ala. Sedgbọ mmiri ndị a na-eme ka ebe ala dị banye ebe a na-eke ndagwurugwu dị larịị. Nọmalị osimiri niile dị ka ndagwurugwu V ebe glaciers dị ka ndagwurugwu U. Nke a bụ n'ihi ọsọ ọ na - eme ka mmiri dọọ ala ma nye ya ọdịdị.
A na-eche Mississippi nke elu ka etolite tupu afọ Wisconsin. O nwere ike ịbụ na osimiri a bụ osimiri na-esite na ntanetị nke etolitere na gburugburu 800 BC
Flora na anụmanụ nke Osimiri Mississippi
Site na ịgafe ọtụtụ steeti na inwe ihe ọgaranya na silt na ụrọ nwere nnukwu ọgaranya na ahịhịa na anụmanụ. Tụkwasị na nke ahụ, inwe ihu igwe na mmiri okpomọkụ na-adị mma maka mmepe nke ọtụtụ ụdị anụmanụ na osisi. Ma osimiri ahụ ma bekee n'ozuzu ya na-enwe ọ bioụ dị iche iche.
N'ime anụmanụ ndị si na Osimiri Mississippi nwee ụdị ndị a:
Louisiana nwa ojii
Agụ iyi America
Edo edo edo map
Utu mgbanaka eserese gbara gburugburu
Azụ na-agba egwú a maara dị ka Notorus hildebrandis.
Ọtụtụ n'ime ụdị ndị a edepụtara nwere ọrịa. Nke ahụ bụ, ha bụ ụdị mmiri pụrụ iche nke Osimiri Mississippi ebe ọ bụ naanị na a ga-ahụ ha na mbara igwe a. Ọzọkwa, e wezụga ụdị ndị a na-akpọ aha ha, e nwere ahịhịa akụ́kụ́ iri atọ na atọ na ụdị akpụpe iri ise na asaa. O nwere umu oriọna 63 n’ime ebe enwere omimi miri.
N'ihe banyere osisi flora, efere ahụ niile nwekwara ọtụtụ ụdị, ụfọdụ nwere nsogbu na ndị ọzọ enweghị. Edepụtara ihe kacha mara amara:
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ, naanị ndị a bụ ndị bara ụba ma mara.
Mkpa akụ na ụba na egwu
Dị ka a ga-atụ anya ya, osimiri nke jupụtara n'ọtụtụ ihe dị iche iche na mbara ala dị nnukwu mkpa akụ na ụba maka mba ebe ọ na-asọ. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo nke dabere na Osimiri Mississippi. A na-ejikwa ya dị ka mmiri mmiri si n'otu ebe gaa ebe ọzọ wee guzobe azụmaahịa. Site na mbata nke ndị na-achị ala, osimiri ahụ ghọrọ ụzọ dị mkpa iji nwee ike izipu kol, mmanụ, nchara na ngwaahịa ndị ọzọ a na-akọ ugbo.
Laa azụ na 1820s bụ mgbe ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri bụ otu n'ime ụgbọ njem kachasị eji eme njem na osimiri a. Oge dị n’agbata 1830 na 1950 bụ oge ọla edo nke ụgbọ mmiri ndị a. N'ime ngwaahịa azụmahịa ndị a na-ebuga n'ihi osimiri a, anyị na-ahụ owu.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Osimiri Mississippi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Osimiri Mississippi